World News | SAHAN ONLINE - Part 3
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-Un ayaa booqasho taariikhi ah ku tagay Koonfurta Kuuriya,wuxuuna ballan qaaday taariikh cusub oo ku saabsan xiriirka dalkiisa kala dhaxeeya dalka deriska la … [Read more...]
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo ka hadlay sida laga yeelayo Ciidamada ay Tababareen Imaaraadka
MUQDISHO - Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay sida laga yeelayo ciidamada ay tababareen Imaaraatka Carabta. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa … [Read more...]
Madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed oo lagu Xukumay 24 sano xabsi ah
SEOUL - Madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa maanta oo jimce ah lagu xukumay 24 sano xabsi ah. Maxkamadda ayaa Park Geun-hye ku heshay danbiyo la xiriira musuqmaasuq iyo ku … [Read more...]
Madaxweyne Donald Trump oo diiday in sharci la siiyo boqolaal kun oo qof
WASHINGTON – Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in sharci la siiyo boqolaal kun oo qof. Donald Trump waxa uu sheegay in uusan jirin heshiis ay la galayaan Xisbiga Dimoqraadiga … [Read more...]
KENYA: Uhuru Kenyatta Iyo Raila Odinga oo ballan qaaday iney Heshiinayaan
NAIROBI – Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa ballan qaaday iney bilaabayaan geedi socod dib u heshisiin ah. Hoggaamiyaashan ayaa si kulul … [Read more...]